Ldies fonon-tanana Suède Merino fonon-tànana vita amin'ny volon'ondry amam-bolo amam-bolo
Vita amin'ny zanak'ondry merino 100% tena izy ireo. Ary ity akora voajanahary ity koa dia mafana sy miaina. Namboarina tamin'ny teboka telo amin'ny tanany. Safidio tsara ny volom-bolo faran'izay tsara toy ny cuff. Hatsaran-tarehy sy ahazoana aina! Tanan-tanana ataon'ny mpanao asa tanana izay manana traikefa mihoatra ny 10 taona. Ataovy mafana hatrany ny tananao amin'ity ririnina sy premium ity.
Vita amin'ny fanetevan'ny merino tena izy roa sosona merina, dia malefaka be ireo. Mafana sy mateza tokoa ny hoditr'ondry ary na izany aza, ny fibre voajanahary dia mahatonga azy ireo ho miaina. Hanafana ny tananao izy ireo amin'ny andro mangatsiaka indrindra amin'ny asa tanana All Handsewn. tonga lafatra amin'ny fampiasana toetrandro isan'andro sy mangatsiaka.
Fonon-tanana vita amin'ny hoditr'ondry vita amin'ny tànana Napa misy fomban-tànana
Vita amin'ny hoditr'ondry merino napa, Shearling Sheepskin & Napa Skin. vita amin'ny hoditra maharitra napa miaraka amina volon'ondry voajanahary malefaka sy mafana. Ny kilasika amin'ny fonon-tànana mihaja amin'ny tovovavy Namboarina tsara sy noforonina. Volavola miaraka amina tanana iray amin'ny lamosina, hatsaran-tarehy ary kanto ary mifanentana amin'ny volon'ondry miforitra.
Saron-tànana vita amin'ny hoditr'ondry vita hatry ny ela miaraka amina fehin-kibo misokatra ny vehivavy vita tanana
Vita amin'ny hoditr'ondry merina fotsiny, manety ny iray amin'ireo volon'ondry tsara kalitao tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Ny hoditr'ondry voajanahary dia malefaka sy maivana, mafana sy mahatalanjona tokoa. Ny fonon-tànana kilasika amin'ny vehivavy dia voaravaka kanto. Notsongaina miaraka amina fehin-kibo misokatra, nifanandrify tamin'ny fanidiana ny tadiny. Jereo voajanahary sy hatsaran-tarehy, mianjera amin'ny toerana rehetra izy ireo. Mety tsara amin'ny akanjo mangatsiaka amin'ny toetr'andro izany!